Ururka Haweenka gobolka Sh/dhexe oo olole nadaafadeed ka wada Jowhar – Radio Muqdisho
Ururka Haweenka gobolka Sh/dhexe oo olole nadaafadeed ka wada Jowhar
Olole nadaafadeed oo ay horkaceyso guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Sh/dhexe ayaa ka socda degmada Jowhar ee xarunta gobolkaasi.
Ololahan oo maalmihii la soo dhaafay ka soconayay Afarta xaafadood oo ay ka koobantahay magaalada Jowhar ayaa waxaa soo abaabulay ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Sh/dhexe Marwo Sacdiyo Maxamed Nuur (Sacdiyo Buris) oo iyadu soo kormeertay habsami u socodka ololahaasi, islamarkaana warbaahinta kula hadashay xaafadda horseed xilli ay ka socotay olole nadaafadeed ayaa sheegtay in ololahani uu yahay mid sare loogu qaadayo bilicda magaala madaxda gobolka ee Jowhar.
“Howlaha ka socda Afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ayaan kormeer ku mareynay sida Kulmis, Buulo Sheekh, Horseed iyo Hantiwadaag, gabdhaha ka shaqeeynaya nadaafada iyo bilic soo celinta howshooda aad iyo aadeey u socotaa” ayey tiri Marwo Sacdiyo Buris oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Sh/dhexe.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey ku dhiiri gelisay haweenka nadaafadda in la abaalmarin doono islamarkaana an la iloobi doonin kaalinta muhiimka ah oo ay kaga jiraan bulshada iyo horumarka deegaanka.
Marwo Sacdiyo Buris ayaa hoosta ka xariiqday in ololahani nadaafadeed ay ku baahin doonto dhamaan degmooyinka gobolka oo dhan, waxeyna tilmaantay in haweenka gobolka aysan ka daali doonin ka qeyb qaadashada horumarinta adeegyada bulshada, sida nadaafadda, nabadgelyada, waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga iyo wacyigelinta.
Waxey ugu baaqday maamulka iyo hey’adaha samafalka iney ka caawiyaan haweenka qalabka loo adeegsado nadaafadda iyo gaadiidka culus, iyadoo ka dalbatay bulshada inteeda kale iney ka qeyb qaataan horumarinta adeegyada bulshada ee gobolka.
Saraakiisha Hey’adaha Ammaanka Oo Ka Shiray Sugida Amniga Caasimada
Daawo Sawirrada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay Riyadh